चीनको अघोषित नाकाबन्दीको शिकार हुदै राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्स ! « Swadesh Nepal
चीनको अघोषित नाकाबन्दीको शिकार हुदै राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्स !
गत महिना नेपाल भ्रमणमा आएका चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालसँग सबै प्रकारका मार्ग खुल्ला गरेर विकासमा सघाउने घोषणा गरेका थिए। राष्ट्रपति सीले नेपाललाई ‘ल्यान्डलक्ड’बाट ‘ल्यान्डलिंक कन्ट्री’का रुपमा जोड्ने घाेषणाा समेत गरेका थिए।
तर, राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई ६ वर्षदेखि चीन उडानका लागि अनुमित दिएको छैन। आधा दर्जन चिनियाँ वायुसेवा कम्पनीलेहरुले भने नेपालमा उडान गर्दै आएका छन्। ६ बर्षादेखि अनुमति नपाउनुलाई निगमका अधिकारीहरूले चीनको नाकाबन्दीका रुपमा लिएका छन्।
चीनबाट ६ वटा एयरलाइन्सले काठमाडौं उडान गरिरहँदा निगमलाई भने ६ वर्षदेखि प्रक्रियामै अल्झाएर राखेको छ। जसका कारण चीनबाट नेपाल आउन चाहाने पर्यटकले महंगो हवाई भाडा तिर्नु परेकाे छ।
अहिले चिनियाँ एयरलायन्सहरूले मनपरी भाडामा कार्टेलिङ गर्दै आएका छन्। निगमले उडान गर्ने हो भने ग्वान्जाओ २० हजार रुपैयामा पुग्न सकिनेछ। तर, चिनियाँ एयरलाइन्सहरूले ७० हजार रुपैयाँसम्म हवाई भाडा लिँदै आएका छन्।
नेपालका दुई छिमेकी भारत र चीन मध्ये चीनले नेपाललाई उडान गर्न नदिँदा भारतले भने दर्जनौ शहरमा निगमलाई उडान अनुमति खुल्ला गरेको छ। अहिले पनि निगमले दिल्ली, बैंग्लोर, मुम्बई र कोलकत्ता उडान गर्दै आएको छ।
तर सन् २०१४ देखि नेपाल वायुसेवा निगमले चीनको ग्वान्जाओ उडान गर्न अनुमति मागेकाे हाे। तर चीनले हालसम्म प्रक्रियामै अल्झाइराखेको छ। चीनको हवाई विभागले पाँच वर्ष अघि निगमको सेफ्टी अडिट गरेर अनुमति दिने बताएको थियो। तर, अहिलेसम्म चीनले त्यसमा चासो दिएको छैन।
‘निगमलाई चीनको हवाई नाकाबन्दी भन्दा पनि फरक पर्दैन,’ निगमका एक उच्च अधिकारीले भने। निगमले दुइटा एयरवस ३२० जहाज खरिद गरेसँगै चीन उडान गर्न चासो दिएको छ । ‘अहिले आएर युरोपियन युनियनको कालो सूचिलाई देखाएर अडिट गर्ने भनेता पनि त्यसका लागि काेही पनि आएका छैनन्,’ निगमका ति अधिकारीले भने।
चीनले अनुदान र सहुलियत ऋणमा एमए ६० जहाज र वाई १२ जहाज दिएसँगै युरोपियनले नेपाललाई कालो सूचिमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। ‘चीनको जहाज नेपालले खरिद गर्ने, युरोपियनले कालो सूचिमा राख्ने तर चीनले युरोपियनको कालो सूचि हेरेर उडान अनुमति नदिने? यो हवाई नाकाबन्दीनै हो,’ निगमका ति अधिकारीले भने।
सेफ्टी अडिटमा टार्दै चीन– नेपाल वायुसेवा निगमलाई चीनले ग्वान्झाओ उडानको प्रारम्भिक अनुमति दिए पनि अन्तिम समयमा आएर ‘सेप्टी अडिट’ गर्नुपर्ने बताएपछि अनिश्चित बन्दै आएको छ। ‘चिनियाँ सिभिल एभिएसनबाट हामीलाई आगामी डिसेम्बरभित्र सेफ्टी अडिट गर्न आउने भनेर पत्र आएको छ, पत्रअनुसार नै हामीले आन्तरिक तयारी गरेका छौँ,’ निगमका सहप्रवक्ता सुलेश मिश्रले भने।
निगमले ग्वान्जाओसँगै, बेइजिङ, कुनमिङ, सांघाई पनि उडानका लागि प्रक्रिया सुरू गरेको छ। तर, एउटा पनि गन्तव्यमा उडान अनुमति नपाउँदा निगमको चीन उडान अन्योलमा पर्दै आएको छ।
निगमले नेपाली व्यापारीहरू बाक्लै आउजाउ गर्ने चीनको व्यापार केन्द्र ग्वान्जाओमा उडानको तयारी गरेको हो। सन् २०१४ देखि उडान अनुमति मागेता पनि निगमले हालसम्म अनुमति पाएको छैन।
दुई देशबीच भएको हवाई सम्झौता कार्यान्यवन नभएको भन्दै गत साउन १० गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय र चिनियाँ अधिकारीबीच हवाई रुट सम्झौता पुनरावलोकन गरिएको छ।
नेपाल र चिनियाँ अधिकारीबीच भएको दुई पक्षीय वार्तामा नेपाल र चीनबीच हप्तामा ९८ वटासम्म एक–अर्को देशमा हवाई उडान गर्न पाउने र आठवटा हवाई रुट प्रयोग गर्न सकिने सम्झौता भएको छ। नेपालले चीनमा १५ वटा विमानस्थलमा तथा चीनले पोखरा र गौतमबुद्ध विमानस्थलमा हप्तामा २१ वटासम्म उडान गर्न पाउने गरि सम्झौता भएको छ।
बेइजिङ, सांघाई, सियान, ग्वान्झाओ, ल्हासा, चेङ्दु, छोङछिङ, कुन्मिङ लगायतविभिन्न १५ गन्तव्यमा नेपाललाई उडान अनुमति दिन चीन सहमत भएको थियो तर सम्झौता भएको तीन महिना बित्न लाग्दा समेत चिनियाँ अधिकारीहरु निगमको सेफ्टी अडिट गर्न आएका छैनन्।
चिनियाँ लगानी भएको हिमालयलाई उडान अनुमति- लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि चिनियाँ र नेपाली लगानीमा सञ्चालित हिमालय एयरलाइन्सले भने चीनको बेइजिङमा उडान थालेको छ। आफ्नै लगानीमा सञ्चातिल हिमालय एयरलाइन्सलाई उडान अनुमति दिएको हो। निगमको सेफ्टी अडिट पश्चात बढीमा अडिट प्रतिवेदन आउन ९० दिन लाग्नेछ।
सन् १०९४ देखि २००७ सम्म निगमले चीनको साङघाई ट्रान्जिट गरी जापान उडान गरेको थियो। तत्कालीन समयमा लामो दूरीको अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान अभाव भएको भन्दै चीन र जापान उडान बन्द गरिएको थियो। बन्द भएको करिव १२ वर्षपछि गत भदौ १२ देखि जापानको ओसाका उडान सुरू गरे पनि चीन उडान सुरू हुन सकेको छैन।
साभार -समुन्द्र घिमिरे/काठमाडौंप्रेस